श्रीमान् स्मिथ प्रभाव र 'विभिन्न सोच' संग सामना गर्दा अचानक दुश्मन: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
श्रीमान् स्मिथ प्रभाव र 'विभिन्न सोच' संग सामना गर्दा असाधारण दुर्व्यवहार
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	2 मई 2017 मा	• 44 टिप्पणिहरु
जो 1999 बाट फिल्म त्रयी 'द म्याट्रिक्स' देखि दृश्य को सम्झना गर्दछ, जसमा कुनै पनि पासर्जी अचानक 'एजेन्ट' मा बदल सकते हो? मैले दिनको सुरुवात गरेपछि, ठूलो अभियानले मलाई कालो बनाउन थाले। यो पृष्ठमा आफैले प्रकट गर्दछ जुन मेरो बारे सबै अस्पष्ट लुगा र मेरो फेसबुक पेजलाई हेर्ने सबैले आकस्मिक रुपमा यस लोभलाई लिङ्कको साथ सम्पर्क गरेको छ। त्यो बन्द र स्पष्ट रूपमा यो गर्नु पर्छ। मानिसहरू एक "पागल साजिश विचारक" पछ्याउने समूहसँग सम्बन्धित गर्न चाहँदैनन्। यो कठोरताले संरचनात्मक र आक्रामक ढंगले राख्छ र राज्यका कर्मचारीहरू (जसको प्रमाण पहिल्यै साइटमा यहाँ प्रदान गरिएको छ) संग एक राम्रो समन्वय तरिकामा लाग्न लाग्दछ। यो रोकथाम प्रभाव 'पाँच बंदर प्रयोग' को सम्झना हो, जसमा ती बन्दरहरु को एक समूह एक अन्य बंदर को रूप मा जल्द को रूप मा जल्द को रूप मा त्यो काना जो मा केले स्थित मा चढने को लागि चढान को सजाछन। यो समूह व्यवहार पछि समूहमा चिसो भरी दोहोर्याएर सीढी चढ्ने प्रयास गरे पछि प्रोग्राम गरिएको छ (हेर्नुहोस् यहाँ प्रयोगको सम्पूर्ण विवरण)। यी आक्रमणहरूको लक्ष्य दुई गुणा हो; एकै ओर, अलगाव को प्रभाव को कारण यो मलाई जारी राख्न को लागी रोकिएको हुनुपर्छ; अर्कोतर्फ यो यसले अरूलाई देखाउँछ कि तिनीहरू कि सीढी चढ्नु हुँदैन। त्यो मिशन अब सम्म असफल भएको छ। म जाँदैछु। गोडा डुङ्गाहरू, फिल्म मा म्याट्रिक्स मा भनिन्छ।
चलचित्रमा एजेन्ट म्याट्रिक्स कुनै पनि समयमा पप गर्न सक्दछ। सबैले प्राय: एक एजेन्सीमा परिवर्तन गर्न सक्षम हुने देखिन्छ जब मुख्य वर्ण नव म्याट्रिक्समा देखाउँछ। सायद तपाईंले त्यो चिन्नुहुन्छ; यदि तपाईं एक जन्मदिन मा कहीं कुरा गर्दै हुनुहुन्छ वा व्यक्तिहरूको सत्य छविलाई असर गर्ने विषयहरूको बारेमा काम गरिरहनु हुन्छ। Spontaneously मानिसहरू संसारको आफ्नो धारणा जगाउन विचारहरूको सामना किनभने, एक भारी वैमनस्यता लाग्न सक्छ। फिल्मको अर्को मुख्य चरित्र मोरपैस, यो कसरी आउछ भनेर तल भिडियोमा वर्णन गर्दछ। लामो मान्छे हामी illusory वास्तविकता, (को कुलीन गोप्य समाजमा मा revered रूपमा) ठूलो architect द्वारा निर्मित, एक कुलीन वर्ग द्वारा गार्ड सहित र जोकोहीले बचाव मा बाँच्ने मार्फत देख्नुभएन रूपमा अझै प्रणाली को प्रणाली र यसैले नै संरक्षकको बुझ्नुहुन्छ तपाईले प्रणाली पक्का गर्ने बित्तिकै परिवर्तन हुनेछ। जबसम्म तुरुन्तै तपाईंको दिशामा तुरुन्तै परिवर्तन र प्रत्यक्ष सिधा हुनेछ। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
म्याट्रिक्स त्रयीबाट अनुगमन गरिएका फिल्महरू अन्ततः महान वास्तुकार र जागृत व्यक्तिहरूको प्रणाली बीचको एकताबद्धतालाई नेतृत्व गर्दछ; जसको कारण प्रणालीको अवस्थित अस्तित्व हो, जस्तै यो थियो, नव को असफल अन्तहीन चक्र द्वारा यो प्रणालीलाई बुझ्न र बुझ्न को लागी। यो निश्चित रूप देखि ट्रांसहेमनियस्ट र एलिटिस्ट बल क्षेत्र को इच्छा हो। जगेडा आत्माहरूले अन्ततः म्याट्रिक्सको अस्तित्वको अनुरूप हुनुपर्छ र अनन्त आयामहरूको आनन्द उठाउन सक्ने हुन सक्छ। वास्तवमा, यो फिल्म धेरै सत्यको साथ खुलासा प्रचार अभियान थियो, तर एकलतामा निर्देशित भएको थियो जहाँ हामी मानिसहरूको Google को अग्रगामी रे कुर्जेइल र मिशियो काकूको बारेमा कुरा गर्दछौं (हेर्नुहोस् यहाँ).
यसैले मानिसहरु लाई जागरण को लागी प्रणाली को जगेडा गर्न को लागी एक मुश्किल मामला हो। तर त्यो प्रणाली के हो? म्याट्रिक्स के हो? यो बुझ्न सक्षम हुनुको लागि, यो रे कुर्जेइल, मियोइओ काकू, एलोन मुस्क र अन्य प्रचारकहरू र ट्राफेनम्युमेममेन्ट चलाउने व्यक्ति जस्ता विचारहरूको ध्यान दिन उपयोगी छ। उनीहरूले सोचे कि 2045 को लागि हामी हाम्रो मानव शरीरको नैनो टेक्नोलोजी अवतारहरू (प्रतियां) बनाउन सक्षम छौं, जसमा हामी हाम्रो चेतना अपलोड गर्न सक्छौं। यो एक रोचक तरिका र उल्टो फिलिम पारदर्शिता मा देखाइएको छ। तिनीहरू पनि सोच्छन् कि हामी डिजिटल छौं augmented वास्तविकता संसारहरू सिर्जना गर्न जुन जीवनको वास्तविक वास्तविक लाग्छ र हामी कहाँ रहन सक्छौं जस्तो कि हामी वास्तवमा त्यहाँ त्यहाँ बस्छौं। खेलको बारे सोच्नुहोस् जहाँ तपाईँसँग भर्चुअल वास्तविकता चश्मा छ र यसमा तपाईं आफैलाई त्यो खेलको साथ पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। तर चेतना अझै पनि यो त हामी अब हाम्रो शरीर, हाम्रो पृथ्वी, हाम्रो ब्रह्माण्ड र डिजिटल सिर्जना universes बीच भिन्नता छ, 'बादल' साथ मर्ज थिए, हाम्रो दिमाग फन्दामा छ तरिकामा। यो एक साजिश सिद्धान्त होइन; त्यो के यी सज्जनहरूले आफैलाई घोषणा गर्छन्। कृपया 'एकलता' शब्दको साथ संयोजनमा नामित नामहरू हेरेर यूट्यूब हेर्नुहोस्।
यस्तो सज्जनहरूको रूपमा, जसलाई अझै पनि सफल व्यवसायी व्यक्ति भनिन्छ (पढ्न यहाँ थप), हामी विश्वास गर्दछौं कि हामी आफ्नो चेतना डिजिटल निर्मित सृष्टि संसारहरूमा अपलोड गर्न सक्छौं र, जस्तै थिए, 'क्लाउड' मा मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ कि यो अहिले अहिले होइन। त्यो म्याट्रिक्स चलचित्रको सम्झना हो। के सोच्नुहोस् कि यो सम्भव हुन सक्दछ कि तपाईं वास्तविकतामा रहनु भएको वास्तविकता पहिले नै एक सिर्जना गरिएको वास्तविकता हुन सक्छ। विभिन्न धर्महरूको सृष्टि कथाहरूलाई ध्यान राख्नुहोस्। यो हुन सक्छ? त्यो धेरैका लागि धेरै पुल हो। डा। जर्ज मुटुले तल हेर्ने जस्तो निष्ठा TED प्रस्तुति दिए। यसलाई हेर्नको लागि एक क्षण लिनुहोस्। केहि पनि छैन, विज्ञान र ट्राफेनमेन्सिस्टहरू यस सक्रियतामा सक्रिय रूपमा संलग्न छन्। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
त्यसोभए हामी अवधारणात्मक प्रश्नमा आउँछौं कि यो सम्भव हुन सक्छ कि हाम्रो चेतना पहिले नै प्रणालीमा फसेको छ। कल्पना गर्नुहोस् कि Google ले रे कुर्जेइलले प्रचार गरेको डिजिटल तथ्याङ्कहरू सिर्जना गर्न सक्षम छ र तपाईं यस्तो वास्तविकतामा जागरूकता अपलोड गर्न निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसपछि कसले तपाईंको वास्तविकता अनुभव नियन्त्रण गर्छ? त्यो साँच्चै 'क्लाउड' प्रबन्धक हो; कृत्रिम खुफिया अनुकार को प्रशासक; प्रशासक जसले आफ्नो चेतना अपलोड गर्यो; Google। के यो अवस्था पहिले देखि नै लागू हुन्छ कि हुन सक्छ? त्यो धेरै को आँखा मा एक विचार को विचित्र र दूर देखि मोड़ मोड़ हुन सक्छ। तर यदि तपाई चलचित्रमा म्याट्रिक्स लाई सोच्नुहुन्छ र तपाईलाई ध्यान दिनुहुन्छ कि हलिउड अभिजात वर्ग वर्गको हातमा छ जुन हामीलाई प्रभाव पार्छ कि स्किफ एक फंतासी तस्बिर हो जुन तपाईले बियर र एक थोरै बोररनट पे छरिन्छ, तपाईं थप खरिद गर्न समस्या लिनुहुन्छ।
धेरै लेखहरूमा वेबसाइटले कसरी वर्णन गर्दछ कि हामी कसरी वास्तविक जीवनमा एक समान छ आत्मा आत्मा; जस्तै Google ले भविष्यमा हाम्रो चेतना हुन सक्छ यदि हामी यसलाई कुजवेइल र सह द्वारा बनाईएको डिजिटल विश्वव्यापी (आयाम) मा अपलोड गर्न निर्णय गर्दछौं। कृपया ती लेखहरू मेनु वस्तुहरू अन्तर्गत पढ्नको लागी 'म्याट्रिक्स''म्याट्रिक्स भन्दा बाहिर'र अन्य कोटिहरु। बेशक तपाई पनि विश्वास गर्न जारी राख्नुहुन्छ कि कुनै प्रणाली छैन र मार्टिन व्रिजल्याण्डले कल्पना कथाहरू घोषणा गर्न चाहन्छ। म तिमीलाई दोषी लाग्न सक्छु। यो पनि धेरै दूर fetched छ यदि यो खोज सुरु हुन्छ जान्न गहिरो अर्थ छैन। हेर्ने माध्यम वा 'जग्गा' अक्सर प्रायः मिडिया र झूटा वस्तुहरू जस्तै इतिहासमा झूटो देख्न सुरु हुन्छ र खोज गर्न सकिन्छ कि सँधै पूजा गर्ने एक एलिटिस्ट वर्ग हो। त्यसपछि सम्भवतः यो पत्ता लगाइएको छ कि शनि यस समय-निर्वासित आत्मा जेलको क्रोनोस मुख्यफ्रेम हुन सक्छ। यो हलिउड द्वारा XNumX बाट फिल्म इन्स्टस्टेलर मा थोडा सा द्वारा प्रकट गरिएको छ। यो केही छैन कि यो फिल्मले 2014 पुरस्कार 'शनि पुरस्कार"(नाममा ध्यान नदिनुहोस्) 2015 मा। के तपाईं सोच्न उत्प्रेरित हुनुहुन्छ?
स्रोत लिङ्क सूची: variety.com
Transhumanism, त्यो के हो र अहिले यो यति खतरनाक किन हो?
संसार किन केही वर्ष भित्र खुली कैदीमा परिवर्तन भएको छ
नीदरल्याण्ड भरमा 5G इन्टरनेटको उपहार वा तपाईंको आफ्नै डिजिटल क्यामेरा?
फेसबुकले कृत्रिम खुफिया प्रयोग गर्नेछ जुन तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ
ट्याग: विशेष, गूगल, मार्टिन भिजल्याण्ड, श्रीमान् स्मिथ प्रभाव, रे kurzweil, singularity, मैट्रिक्स, त्रयी
2 मई 2017 मा 23: 22
र यसैले यूरोपीय संघ मुक्तिको कम्युनिस्ट राज्य हुन्छ जहाँ व्यक्ति राज्य को अधीनस्थ छ। त्रिपुमनवादवादी एजेन्डा र डिजिटल जेल (सुरक्षा नेट) बाट अलग रहनेछ, जसले मानिसजातिलाई अन्तिम झटपट र नि: शुल्क दिनेछ।
"यदि तपाईं भविष्यको दर्शन चाहनुहुन्छ भने, एक डुङ्गा कल्पना गर्नुहोस् मानव अनुहारमा सधैंभरि।"
- जर्ज ओवेलो
ईन्टरनेट स्टेटब्रोरोको अनुसार सार्वभौम राज्यहरू हटाइनु पर्छ:
कलर्जी योजना थप विस्तार गरिएको छ ताकि व्यक्तिको पहिचान हराउनु पर्दछ, ताकि व्यक्तिले अझ सजिलै राज्यमा सजिलै परास्त गर्नेछ।
EUSSR भित्र कुल सेंसरशिप र नियन्त्रण फेसबुक / गुगल आदि जस्ता अगाडिका कम्पनीहरू प्रयोग गर्दै।
अस्ट्रियाले डिजिटल सेवाहरू खोज्दैछ जस्तै वर्णमाला इंक को Google वा फेसबुक इंक। राष्ट्रको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूसँग लेनदेनको लागि कर तिर्नुहोस्, कर प्रणालीमा प्लग गर्न प्रयास गर्दै अझै ईंट-र-मोर्टार व्यवसायको लागि डिजाइन गरिएको छ।
योजना को सबै भन्दा घमन्डी भाग ट्विटर इंक, Google वा फेसबुक को व्यापार मोडेल लक्ष्य: मुनिको tacit सम्भ्कौता कति अनुयायीहरूलाई खोजी, लिङ्कमा, पोस्ट र प्रयोगकर्ताहरूले कम्पनीहरु दर्जी विज्ञापन मदत त्यो एल्गोरिदम मा उपयोग डाटा खुवाउन गरौं रूपमा tweeting रूपमा लामो मुक्त रहन्छ कि सबै भन्दा अधिक सम्भावित खरीददारहरूको उद्देश्य हुन सक्छ।
यो ठुलो ढोका बन्द हुन्छ ....
युरोपमा इलेक्ट्रोनिक पहिचान:
कानुनी चुनौती र भविष्यका परिप्रेक्ष्य (ई-आईडी 2020)
2 मई 2017 मा 23: 41
चिन्ताजनक भौतिक र डिजिटल लि ..
सहकार्य र नवाको
ट्युन फ्रेमवर्क कार्यक्रम
आईसीटी नीति समर्थन कार्यक्रम (आईसीटी पीएसपी)
ट्रनिक आईडी (ईआईडी)
परियोजना पूर्ण शीर्षक: सीमा पार गरिएको सुरक्षित पहिचान लिङ्क गरिएको
eID PEGS को लागि अन्तरक्रियाशीलता
EID को लागि सामान्य विशेषताहरू
2 मई 2017 मा 23: 43
2 मई 2017 मा 23: 47
तपाईंले यहाँ भेट्नुभयो?
2 मई 2017 मा 23: 52
हामी जान्दछौं कि GOOGLE डेटा केन्द्र तपाईका लागि हुनुहुन्छ ... एक बेल्ट राइङ। ईयू कम्युनिष्ट पार्टीका ह्यान्ड्स र GOOGLE / PALANTIR (सीआईए / एनएसए / डीआईए आदि) मा डाटा
Groningen मा भूकम्पहरू ... त्यहाँ एक एजेन्डा हो जुन स्पष्ट हुन सक्छ:
2 मई 2017 मा 23: 54
तिनीहरू एनएसए (SkyNet) मा आफ्नो हात रमाउन तयार छन् ...
4 मई 2017 मा 14: 31
बेल्जियममा स्काईनेटको उल्लेख गर्ने मजाकिया, स्किनेट भनिन्छ इन्टरनेट प्रदायक पनि। चलचित्र टर्मिनेटरमा नेटवर्क पछि नामाकरण गरियो
र हामी चलचित्र टर्मिनेटर (5) Genisys हेर्न भने तपाईं SkyNet घुसपैठ र बलियो अमर दौड सिर्जना गर्न मानिसको 1 सम्पूर्ण फारम सिर्जना गरिएको थियो कहानी भन्छ हेर्नुहोस्। के यो Google ले 2029 / 2045 विरुद्ध के गर्न चाहन्छ?
"अमरता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया 2029 द्वारा सुरू हुने बित्तिकै नैनो-बटहरू सिर्जना हुन्छन् जुन हाम्रो शरीरबाट रोगलाई लड्न सकिन्छ"
के हामी फिलिम टर्मिनेटर मा देख्न सक्दैनौं, मानव शरीर जसले नैनो कणहरूसँग बाँधिएको छ?
4 मई 2017 मा 14: 34
स्रोत रिपोर्ट गर्न बिर्सनुभयो:
4 मई 2017 मा 16: 01
@CuriousOne, यो सबै एनएलपी / भ्रामक संदेश हो कि हामी हामी वरपर देख्छौ र हलिवुड उनको भाग हो। यी सन्देशहरूको बारेमा एक राम्रो फिलिम हो 1988 बाट 'तिनीहरू प्रत्यक्ष'। अधिकांश मानिसजातिले यो 'ट्रान्समैनमेन्ट' भ्रामक एजेन्डाको कार्यान्वयनका लागि दशकौंको लागि तयारी गरेको छ ताकि पल आउदा तिनीहरूले इस्तीफा गर्नेछन्।
YZ पीढी प्रोग्रामको रूपमा राम्रो छ वा। गुमाए र यो धोखाधडीको सामना गर्नु पर्छ:
- Y = Generation Y को पीढी एक्स को उत्तराधिकारी हो र सामान्यतया 1982-2001 अवधि को प्रयोग गरेर परिभाषित गरिएको छ।
- Z = र अन्तमा पीढी Z; आज जेएनयुमएक्सको बीचमा जन्मे जुन आज यो पीढी बीचको गणना गरिन्छ।
Google (DARPA) एजेन्डा संयुक्त राष्ट्र एजेन्डा 2030 को समानांतर चलाउँछ। हामी सबै प्रकृति मा एक आवश्यक पोषक तत्व छ र तपाईं जनसंख्या कमी पुन: गर्न सक्छन् जो CO21 मा आक्रमण भन्दा अधिक छ, जो स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, आदि जस्ता सर्तहरू डायरीहरू2(रोम को क्लब) देखि bombarded छन् (प्रस्तुति हेर्न टीकाको सन्दर्भमा बिल गेट्स)
SkyNet को (क्वांटम / डी-वेभ) डेटाबेस एनएसए र सैन्य औद्योगिक जटिल (DARPA) छ र Genysis 2002 मा 'रक्षा सूचना जागरूकता कार्यालय को संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग "यो विभाग पछि विरोध पछि सुरू एक परियोजना हो (हेर्नुहोस् लोगो सूचना जागरूकता कार्यालय) भनिन्छ रद्द गरिएको छ र एनएसएको PRISM यो परियोजनाको परिणाम हो। मेरो विचारमा, यो सब शाब्दिक र प्रतीकात्मक रूपमा भूमिगत भएको छ। यस साक्षात्कारमा DUMB को बारेमा एलोन मस्कबाट टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्:
ठूलो डाटा जादु शब्द यी डेटाबेस भरिएको गर्न छ र विडंबना यो आत्म गर्न मान्छे को सबै भन्दा स्वेच्छाले Palantir सफ्टवेयर आदि प्रयोग गरेर र माथि डेटिंग फेसबुक, ट्विटर, गुगल + आदि मा आफ्नो प्रोफाइल मार्फत एउटा योगदान बनाउन छ पनि ग्राफिक हुन सक्छ कि एक निश्चित व्यक्ति को सामाजिक सम्बन्ध हो। व्यावसायिक रूपमा, निस्सन्देह, एक धेरै आकर्षक अवधारणा, त्यसैले यो एक मा धेरै पक्षीहरू बचाउँछन् एक पालो भयो। को EUSSR PSD2 को विश्वासघात रूपमा टोक स्थापना गर्न अर्थ र तेस्रो दल व्यक्तिहरूलाई बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न कुनै बच्चा छ।
छोटो छ, नेट धीरे बन्द हुन्छ ...
4 मई 2017 मा 16: 34
4 मई 2017 मा 20: 52
र यो कसरी सुरु हुन्छ ... मानिस अझै पनि सुविधा दिन्छ?
4 मई 2017 मा 21: 04
जब मैले गुप्त सेवाहरू र भूमिगत आधारहरूबारे जानकारी पाउँछु, म सधैं अमेरिकाको अवस्थाबारे जानकारी देख्छु, तर यसलाई बिर्सनु हुँदैन कि यो युरोपमा पनि अवस्थित छ।
SkyNet मा जारी राख्न र त्यसपछि फेसबुक स्विच, फेसबुक मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्न मुख्य रूप सुरु भएको छैन तर समय डेटाबेस मा भावना र विचार सुरक्षित गर्न बरु कि जब यो SkyNet तिनीहरूलाई संग मिलेर छ पहिले नै एक सफ्टवेयरलाई लिखित छ जुन तपाइँको व्यक्तित्वलाई फिट गर्न आवश्यक छ ताकि तपाइँ यसलाई छिटो बाँचिरहेका छन् र तिनीहरूसँग तपाइँको शरीरमा छिटो नियन्त्रण छ।
अब तिनीहरू केवल एनएलपी र अचेतन सन्देशहरु द्वारा र पछि सोच मा नियंत्रण र पछि शरीर को बारेमा Skynet द्वारा।
यसबाट जडान विच्छेद व्यावहारिक रूपमा असम्भव हुनेछ किनभने सफ्टवेयरले तपाइँको शरीरमा राम्रो तरिकाले लेखेको छ र अब तपाइँ यसलाई जोडिएको छ भने, अधिक जानकारी कार्यक्रम पाउनेछ र गहिरो तपाईंलाई डुब्न सक्नुहुनेछ। जब सम्म तपाई आफैले म्याट्रिक्स बाट टाढा र आफ्नो शरीरमाथि नियन्त्रण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न।
म थप वा कम नै जगाउन देखि, यो वास्तवमा 1-2 वर्ष म यति जानकारी / disinfo YouTube नेट मा छ र कहिलेकाहीं रूखहरू अब जंगल मार्फत हेर्न र गर्न सक्ने हुनाले सही र गलत थियो के बुझे अघि पारित गरेको छ मैले देखेको छु कि संसारले कसरी काम गर्छ र म टिभी वा चलचित्रहरू हिँड्न सक्छु। तिनीहरूले रोमाञ्चक र जब म अब हेर्न म प्रतीक र लुकेका सन्देशहरू तर केही देख्न hallucinating थिए किनभने पहिले, मैले चलचित्र हेर्नुभयो। कहिलेकाहीं म एउटा चलचित्र उहाँलाई फिर्ता रील रोक्न र पुण / म एक विशिष्ट रेकर्डिङ 2-3 समय सुन्न र म सधैं संसारको काम कसरी छक्क छु। यो पवित्र कुरा थिए भने आफ्नो टिभी र गाँसिएको र भन्नुभयो र देखाइएको छ कि सबै विश्वास कसरी छक्क धेरै सांझ सँगै। म भएको छु किनभने म तिनीहरूलाई म पालन र यसलाई सबै मिलेर फिट तिनीहरूलाई कसरी हेर्न गरौं भनेर केही राम्रो सल्लाह दिन सक्छन् कहिल्यै कुनै एक दोष, रातो वा नीलो गोली बीच चयन गर्न भन्नुभयो।
4 मई 2017 मा 22: 14
@CuriousOne, यो मस्तिष्क नियन्त्रण (धारणा) को बारे मा हो एक पहिले देखि नै धेरै उन्नत छ यदि तपाईं सैन्य औद्योगिक परिसर (DARPA सहित) को भित्र व्यापार को देखो। र तपाईं मुख्यतया आवृत्ति प्रविधिहरू (एएलएफ तरंगहरू) मा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं। जस्तो कि निकोला टेस्लाले भने, सबै कुरा आवृत्ति र कम्पन हुन्छ, केहि होइन किनभने उनको पेटेंट 'गहिरो अवस्था' मा प्रयोग हुन्छ।
अब 4G / 5G को विकास र कार्यान्वयनलाई विचार गर्नुहोस् र त्यहाँ त्यहाँ एक तथाकथित GRID भूमि, समुद्र र हावामा रहेको छ। अन्य शब्दहरुमा, संकेत हेरफेर देखि कुनै भाग्य छैन। प्रवेश। किनभने तल दस्तावेजमा वर्णन गरिएको छ, जुन मैले अत्यधिक सिफारिस गर्दछु, दिमागहरूमा फायरवाल छैन। सबै कुरा अनौपचारिक रूपमा प्रसोधनको लागि प्रसोधन पछि प्रवेश गर्दछ जसको कोर्टेक्सले बढी प्रभाव पार्छ वा अधिक हदसम्म प्रभाव पार्ने तर्कसंगत CQ पछ्याउँछ। तर्क। यदि तपाईंसँग यो नियन्त्रण छ भने, तपाईले व्यक्तिलाई एल्गोरर्टाइम प्रयोग गरेर टाढा टाढा पठाउनुहुन्छ। त्यस सन्दर्भमा, म मर्विन मिन्स्कीको काम (मस्तिष्क म्यापिंग) र डा। रबर्ट डन्कन (सीधा ब्लाउटर)
"हेन्डर ह्यान्ड्स" मा अमेरिकी दृश्य: शरीरको डाटा प्रोसेसिंग क्षमता परिवर्तन
युनाइटेड स्टेट्सले कुन टेक्निकलहरू अध्ययन गरेको छ जुन मानव जीवको डेटा-प्रसोधन क्षमताहरू बिच्छेद गर्ने क्षमता छ? अमेरिकी समाचार र विश्व रिपोर्ट को7जुलाई 1997 मुद्दा मा धेरै वर्णन वा तिनीहरूलाई मानिसहरूलाई, अचेत को अंदर तिनीहरूलाई भाइब्रेट वा nauseate गर्न, अन्य कुराहरु, डिजाइन, तिनीहरूलाई, सुत्न तिनीहरूलाई गर्मी, वा एक तर्साउने लहर तिनीहरूलाई तल दस्तक राख्न  ती प्रविधिहरूले चमकदार लेजरहरू समावेश गर्दछ जसले विद्यार्थीहरूलाई बन्द गर्न बलियो बनाउन सक्छ; ध्वनिक या ध्वनि आवृत्तियों जो दर्द र स्पाजम को कारण; आंतरिक रगत को दुखाइ र स्पाज को कारण गुंजाइश; र मानिसहरु वा हवाई जहाज दस्तक गर्ने क्षमता संग सदमे तरंगहरु र मरिच स्प्रे वा रसायन संग मिश्रित हुन सक्छ। 
परिमार्जनको साथ, यी प्राविधिक अनुप्रयोगहरूले धेरै प्रयोगहरू गर्न सक्छन्। ध्वनिक हतियार, उदाहरणका लागि, ध्वनिक अक्ष राइफल्स वा ध्वनिक क्षेत्रहरू, एकचोटि स्थापित, सुविधा रक्षा हुन सक्छ अस्थाइ बन्दि छुटकारा, नियन्त्रण दंगे, वा convoys लागि बाटो स्पष्ट मा सहयोग रूपमा प्रयोगको लागि छाँटकाँट गर्न सकिएन। यी तरंगहरू, जुन भवनहरू प्रवेश गर्न सक्छन्, सेना र कानुन प्रवर्तन अधिकारीहरूको लागि अवसरहरूको होस्ट प्रस्ताव गर्दछ। माइक्रोवेव हतियार, को परिधीय स्नायु प्रणाली उत्तेजक द्वारा, माथि शरीर गर्मी गर्न सक्नुहुन्छ, epileptic-जस्तो दौरा शामिल induce, वा हृदय गिरफ्तारी कारण। कम-फ्रिक्वेन्सी विकिरणले बिजुली र फ्लू-जस्तै लक्षण र नलीलाई असर गर्छ। अन्य परियोजनाहरू उत्प्रेरित वा नींदबाट बच्न वा मस्तिष्कको मोटर कोर्टेक्स भागलाई असर गर्न खोजे, स्वैच्छिक मांसपेशी आचरणहरू ओभरराइड गर्न खोज्यो। रूसी सरकार ले रिपोर्ट को "ब्लैक विधवा" संस्करण को 100,000 प्रतियां को बारे मा खरीदा छ। 
तथापि, यो "कसैले अनुहार हतियार" को यो दृष्टिकोण कसैले बुझ्न सक्ने व्यक्तिले सामना गरेको थियो। Brigadier सामान्य लैरी Dodgen, नीति र संस्थाये लागि रक्षा को सचिव गर्न उप सहायक, कि अमेरिकी समाचार र विश्व रिपोर्ट लेखमा "inaccuracies मा धेरै" बारेमा सम्पादक पत्र लेखे "रक्षा गरेको दृश्य विभाग गलत प्रतिनिधित्व।"  डोजनको प्राथमिक दावी थियो कि पत्रिकाले यी प्रविधिहरूको प्रयोग र सशस्त्र सेनाहरूलाई उनीहरूको मूल्यको दुरुपयोग गर्यो। Ook उहाँले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि को स्कोप भित्र तिनीहरूको आवेदन विषयमा साथै नत्याग्ने (वा कम्तिमा पुन: डिजाइन) काउंटर कति अनुयायीहरूलाई जानिन्छ लागि कुनै पनि हतियार योजनाहरू काम गर्न अमेरिकी आशय underscored। एक भावना संग छोडिएको छ, तथापि, कि यस क्षेत्र मा अनुसन्धान तीव्र छ। डोजन द्वारा उल्लेख गरिएको एक समूह यो हो कि अन्य देश वा गैर-राज्यका खेलाडीहरू त्यहि बाधाहरुसँग बाँध्न सक्दैनन्। यी प्रविधिहरूमा यी हातहरू प्राप्त गर्न ठूलो इच्छाको साथ यो कल्पना गर्न गाह्रो छ। "मनो-आतंकवाद" अर्को बजाउन सक्छ।
Creutzfeldt-याकूब र इङ्गल्याण्ड ± 54 मा गाई र मानिसहरूलाई मा प्रयोग संग: एक धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न Harald Kautz Vella (40 1997 मा) को अन्त मा राम्रो प्रस्तुति।
4 मई 2017 मा 22: 22
त्यहाँ यो प्रविधिको कुनै आधार छ? वैसे, होलोसोनिक रिसर्च लैब्स र अमेरिकन टेक्नोलॉजी कर्पोरेशन दुवै को निर्देशित ध्वनि को संस्करणहरु छ जो सुन्न सक्दैन। DARPA आफ्नो आफ्नै ध्वनि प्रोसेसरमा काम गरिरहेको देखिन्छ। Intriguingly, रणनीति पृष्ठ रिपोर्ट जुन भगवान हतियार को संशोधित आवाज को रूप मा लङ रेंज ध्वनिक डिवाइस को उपयोग गर्दै छन्:
6 मई 2017 मा 01: 55
त्यहाँ Groningen मा 5G संग प्रयोग गर्दै छ, फ्रिसल्याण्ड मैले यसको बारे केही ठोस पाइएन। बरु तिनीहरू त्यहाँ समस्यामा पर्छन्:
"नेदरल्याण्ड्स मा सबै भन्दा ठूलो निगरानी स्टेशन बरुम को फ्रान्सिसी गाँउ नजिकै स्थित छ। ठूला उपग्रह भित्रीहरूको माध्यमबाट डच र अमेरिकी सरकारहरूले उपग्रह संचारको निरीक्षण गरिरहेको छ। यो निगरानी स्टेशन नीदरल्याण्डमा 4G सञ्जालहरूको थप विकासको मार्गमा उभिरहेको देखिन्छ।
Friesland Burum, डच AIVD (सामान्य खुफिया र सुरक्षा सेवा) र DISS (सैन्य गुप्तचर र सुरक्षा सेवा) उपग्रह व्यञ्जन नेदरल्यान्ड मा 4G नेटवर्क विकास, eavesdropping र जासूसी लागि खडा छ जहाँ मा उपग्रह जमीन स्टेशन बाटो मा एकदम जस्तो Telecompaper को शोध संपादकहरु खोज। "
त्यसैले तिनीहरूले lossen..Friesland र ग्रोनिङजेन त्यहाँ खाली ठाउँ र पर्याप्त क्षमता फाइबर सिसा निर्माण गर्न जडानहरू धेरै छ बस किनभने उपयुक्त कुरा यस प्रकारको लागि एक पायलट क्षेत्र रूपमा छन्, यो समस्या प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर तार्किक देखिन्छ ।
यो त्यस्तो ठूलो रहस्य होइन ????
11 मई 2017 मा 19: 46
@ Averoes Friesland मा यी समस्याहरू4+ MHz आवृत्तिहरूमा केवल 5G / 3000G सञ्जाल विस्तार गर्नका लागि हुन्। 4G 800 / 1800 / 2600MHz आवृत्ति 5G 700Mhz सक्छन् पनि 2100 2600MHZ स्थापित हुनेछ पहिले नै तिनीहरूलाई स्थापना र यदि म गलत छैन। तल्लो आवृत्तिले बलियो संकेत, तर कम डेटा ट्राफिक, कम संकेतले घरहरूमा गहिरो घुसाउन सक्छ र वस्तुहरू र बाधाहरू राम्रोसँग जान सक्छ। उच्च आवृत्ति, कमजोर संकेत तर उच्च डेटा ट्राफिक हुन सक्छ।
वाईफाई संग उदाहरण जो राउटर तपाईं अब 2.4Ghz ब्यान्ड र 5GHz ब्यान्ड 2.4Ghz ब्यान्ड बाहिर अझै प्राप्त गर्न सक्छन् जहाँ घर को बीचमा कम स्वाभाविक तर अझै पनि गरेको छ, तर अधिकतम डाटा दर BV 150Mbs हुनेछ, कमजोर संकेत तपाईं अझै पनि अधिकतम डाटा दर Bv5Mbs घर बाहिर यो संकेत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मात्र हुनेछ 300GHz ब्यान्ड मा प्राप्त।
यो पनि निर्भर गर्दछ कि कसरी संकेत र प्रसारण कहाँ हुन्छ, मलाई थाहा छ कि ती छिटो नयाँ एन्टिनाहरू नयाँ स्थानहरूमा प्रसारण गर्न सक्षम छन् ताकि छिटो र अधिक डेटा प्रस्ताव गर्न सक्षम हुन। र यसले भर्खरै महिनामा छिटो गति बढेको छ। दुवै सार्वजनिक स्थानहरूमा र भवनहरू / कम्पनीहरू भित्र पर्दछ जहाँ Wi-Fi 3g / 4G र 5G पहुँचयोग्य हुनुपर्छ।
5 मई 2017 मा 22: 03
यस बीबीसीको आलेख अनुसार बीएसई महामारीले 1986 वरिपरि बिच्छेद गरेको छ:
5 मई 2017 मा 22: 07
त्यो प्रयोग मलाई मेरो लागि लम्पको रूपमा तयार छ। फेरीसन र ग्रोनिङ्गन आदर्श स्थानहरू छन्
6 मई 2017 मा 02: 03
नीदरल्याण्डका किसानहरू, विशेषतया उत्तर (पूर्व), आफ्नो खेती कारणको कारण राख्न को लागी प्रोत्साहन छैन, एजेन्डा हेर्नुहोस्:
'निश्चित रूपमा 1000 डेयरी किसानहरू चाँडै रोकिन'
आगामी महिनाहरूमा, 1000 2000 डेयरी किसानहरूसँग रहनेछ, राज्य सचिव वान बांधको आशा गर्दछ। उनीहरूले सोचेका छन् कि किसानहरूको संख्या नयाँ रोकिएको व्यवस्थाको प्रयोग गर्नेछ, तिन र डेयरी किसानहरू बीचको सम्झौताको भाग हो जुन यूरोपीय आयोगले आज राती स्वीकृत गरेको छ।
कम मोबाइल कवरेज भएका क्षेत्रहरूका लागि आवरण दायरा
कैबिनेटले विश्वस्त स्थानलाई बलियो बनाउन चाहान्छ कि नेदरल्यान्डले वायरलेस संचारको क्षेत्रमा छ। यही कारणले गर्दा आर्थिक मामलोंको मंत्री काम्पले आवृत्तिको भविष्यको नीलामीमा फाइनान्स दायित्वलाई घटाउनेछ, उदाहरणका लागि 5G बाट। दायित्व नीदरलैण्डमा विशेष इलाकाहरूमा विशेष गरी लागू हुन्छ जहाँ मोबाइल जडान अझ राम्रो छैन। मंत्री क्याम्प ले प्रतिनिधि सभा को एक पत्र मा यसलाई घोषणा गरेको छ। यस महिनाको सुरुमा, सरकारले 'सँधै र हरेक ठाउँमा' वायरलेस आधारभूत पहुँचलाई आधारभूत आवश्यकताको रूपमा प्रयोग गरेको छ।
2 मई 2017 मा 23: 58
विलियम बेनी (पूर्व-एनएसए) यसो भन्छ:
3 मई 2017 मा 00: 25
राजनीतिक प्रणाली जुन अर्थव्यवस्थाको उत्पादन, यातायात र व्यापारको माध्यमबाट राज्य स्वामित्वको विशेषता हो, र मूल्यहरूको प्रशासनिक फिक्सिंग (यानी बजारमार्फत)। राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख भूमिकाको कारण; र सोही पार्टीले सबै सामाजिक संस्थाहरूको वर्चस्व द्वारा सामाजिक रूपमा।
3 मई 2017 मा 14: 03
यसपछि, STORK (ईयू) बाट दस्तावेजहरूको तुलना गर्नुहोस् र पूर्वाधारको आधारभूत ढाँचाअनुसार कुन कुराले DARPA (= Google, अरूको बीचमा) यसको कुल सूचना जागरूकता / जिनेज कार्यक्रमको माध्यमबाट विकसित भएको छ:
दूरीमा मानव पहिचान (मानवआईडी)
रेखाचित्र (आधिकारिक IAO साइटबाट) "दूरीमा मानव पहिचान" परियोजनाको क्षमताहरू वर्णन गर्दै 
एक दूरी (HumanID) परियोजना मा मानव पहिचान, पत्ता लगाउन चिन्न र "शक्ति सुरक्षा", अपराध रोकथाम र "मातृभूमि सुरक्षा / रक्षा" उद्देश्यका लागि ठूलो दूरी मा मानिसहरूलाई पहिचान पहिचान बायोमेट्रिक प्रविधिहरू स्वचालित विकास। 
यसको लक्ष्यमा कार्यक्रमहरू समावेश छन्: 
दायरामा 150 मिटर (500 फिट) पत्ता लगाउन र प्राप्त गर्नका लागि एल्गोरिदमहरू विकास गर्नुहोस्।
24 /7मानव पहिचान प्रणालीमा फ्यूजन अनुहार र गेट मान्यता।
मानव पहिचान प्रणाली विकास र प्रदर्शन गर्नुहोस् जुन 150 मिटर (500 फिट) देखिने दृश्य इमेजरी प्रयोग गरी कार्य गर्दछ।
विस्तृत क्षेत्र को देखने को खोज र दृश्य गेट वर्गीकरण को संकीर्ण क्षेत्र को लागि एक कम पावर मिलीमिटर लहर रडार प्रणाली को विकास।
एक दूरीमा मानव पहिचानको लागि भिडियोबाट गेट प्रदर्शन प्रदर्शन गर्नुहोस्।
एक बहु-वर्णक अवरक्त र दृश्यात्मक अनुहार मान्यता प्रणाली विकास गर्नुहोस्।
विष अब मानिसहरू इनपुट फेसबुक, Google+, ट्विटर आदि को ख्याल राख्छन्
3 मई 2017 मा 14: 15
Google 'Sieg' भाडा अब उपरोक्त भिडियोमा वास्तवमा भविष्यवाणी गरिएको छ:
यो एक प्रकारको लिंक गरिएको इन हत्यारा हुनुपर्दछ; एटीएस र खाली ठाउँ खोज इन्जिनमा। नियोक्ताहरूले अफवाहहरू - पोस्ट पोस्टहरू (यस पृष्ठमा देखाइएका छन्) को अनुसार, आवेदकहरूको आगमन प्रवाहको प्रबन्ध गर्दा। Google भाडा (जाहिरा तरिकाले) गुगल खाताहरूसँग पनि सम्बद्ध छ। यसले सम्भवतः दुवै नियोक्ता र उम्मेद्वारहरूको बारेमा धेरै जानकारी प्रदान गर्नेछ।
3 मई 2017 मा 06: 42
मैले भर्खरै सरकारी साइट बार्सुडा, ब्लडस्पेस भ्रमण गरें। अन्तिम समय2वर्ष पहिले भएको थियो जब 'श्री स्मिथ प्रभाव' लेखहरू पढ्दा, जब म सही लेखियो, मुख्य रूपले डच सरकारका निर्देशक जेरोन हुग्वेईजले रोटरडैमको एक सदस्यले लेखेका थिए।
मेसोनिक क्लब 'कैफेर्ड डी' वा '(गोल्डन काक्रोच)
बाराकुडामा हालैका लेखहरूमा कन्ट्रोल विपक्षी एजेन्सीहरूको आचरण स्पष्ट हुन्छ:
नियन्त्रित विपक्षी एजेन्ट माउड ओर्र्टविज लगभग अनुमान लगाइएको थियो
बाँकी Micha Cunt स्वाभाविक "पुरानो प्रहरी ', साथ आउँछ र आफ्नो lulverhaal को rolodex-pedo नेटवर्क संग पूर्व समलिङ्गी वेश्या Koos वन क्षेत्र आरोप लगायो।
नियन्त्रित विपक्षी एजेन्टहरु हान्स मौरिट् र विम डंकरर द्वारा पारित भएको छ,
पिसाब रिलिज 'समुद्री खाने' संग।
हरेक अनुभवी सत्य खोजीकर्ताले लामो समयको लागि जान्दछ कि यी सबै मानिसहरू शिल हुन्छन्।
र अब यो कुन खेल खेल्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
तिनीहरू जेरोन होगेरवेजका सबै सरकारी कलेजहरू छन्, फरक भूमिकाको साथ तर त्यही लक्ष्यको साथ।
प्रदर्शन र मनोचिकित्सक 'विभिन्न सोच' / सत्य खोजीकर्ताहरू।
3 मई 2017 मा 07: 11
पुन: प्राप्ति, त्यो थियो: कोओस Woudenberg।
3 मई 2017 मा 07: 33
तपाईं अझै पनि यस गन्दाको स्पङ्कको डिक कथा हेर्न सक्नुहुन्छ: "कोओस Woudenberg मा सेक्स को सेक्स मा बोल्छ"
यो पुरानो बक्स को आशा को आशा मा छ कि सत्य खोजकर्ताहरु लाई खतरनाक मनोरोपै को पहिचान गर्न को सिकन को कौशल विकसित गर्दछ।
आफ्नो अमिलो मुख यो भयानक pervert कार्य गर्न एकदम राम्रो लाग्यो र त्यसैले --एज केवल रेडियो साक्षात्कार Myra'- गर्न "कुरा को विरोध एजेन्ट Myra द्वारा सामान्यतया नियन्त्रण गरे, तर यति विशाल स्क्रीन रुचि गर्न चाहन्थे।
लिंक राख्नुहोस् / डटहरू जोड्नुहोस्, सरकारको सेवामा अन्य मनोविज्ञानहरू जस्तै एनआईको भ्यान डेर हम, माउड ओर्र्टविज, माइकल विटिलाटी, मिका काट।
वास्तवमा निको वान डेरि हमको सच्चाइमा सचेत रहन्छ, उनीहरु एकदम कम देखिन्छन, तर माउस कपडामा एक चाउ हो।
3 मई 2017 मा 07: 37
बारादुडा पछि मानिस ("पत्रकार" हो: AIVD-er) जन Libbenga पढ्नुहोस्। उनले जेरोन हग्वेवीज (एलेस्टर क्रोलोले को सदस्य आरटीटी सेन्टर लाई फिर्ता दिए) संग एक साथ काम गर्दछ।
3 मई 2017 मा 08: 17
स्टीव ब्राउन (साल्टो टिभी) तातो कफीको जस्तो आवाज छैन ... यो सबै मा एस्टर्डमम को आसपास मा ध्यान दि्छ
3 मई 2017 मा 08: 20
वैसे, बेरकुडा मा मेरो (पढाई) को अनुभव यो कि कट्टर ईश्वरवादी इस्लाम को अवैध राज्य को बारे मा एक महत्वपूर्ण नोट नहीं हो। वास्तवमा, उनीहरूको उपासना गर्ने एक सच्चाईले मात्र उनको संदेहमा पुष्टि गर्नेछ
3 मई 2017 मा 08: 36
यो साँच्चिकै सत्य हो। Ziva (Barracuda सम्बन्धित स्वापूच ब्लग मा धेरै सक्रिय लेखकहरु मध्ये एक) इजरायल सेना मा पनि छ र तेल अवीव (जसको प्रमाण) मा रहन्छ। तिनीहरू सबै पेशेवर ट्रल्स हुन् जुन यो ब्लगहरू चलाउँछन्।
3 मई 2017 मा 08: 24
3 मई 2017 मा 09: 59
पनि नयाँ सम्प्रादाय नेताहरूले intergalactic र interdimensional समूहका शानदार Tales संग सत्य साझेदारी mingle लागि बाहिर हेर्न र तपाईं आफै energize गर्न पृथ्वीमा यहाँ भनेर बताउनुहोस्। नयाँ अगमवक्ता: मार्टिजेन भ्यान स्टेभेनन। यस्तो व्याख्यान कस्तो लाग्छ? के हडताली छ कि नियन्त्रण वैकल्पिक मिडिया (धरती विषयहरूलाई, Guido Jonkers (WantToKnow.nl, आदि) समूह सबै प्रदान प्रत्येक बगैचा। हो, यो सज्जन मैट्रिक्स बताइएको छ। त्यहाँ उहाँले भन्छ मा सत्य को भागहरु छन्। यो अवस्थामा, हामी देखि (र को लागि) आफ्नो जन्म interdimensional / थियो अन्य ग्रहहरूमा सम्पर्क। यसरी उहाँले पहिले नै विशाल जटिल आयाम र interdimensional जगतले बारेमा यो मेगा जटिल ज्ञान पारित गर्न चिन्ने कसैले संग काम गर्दै छन्। यो नयाँ देखि त्यसैले ज्ञान दिइएको छ गुरु (र त्यसैले धेरै जटिल र विभवयुक्त गरे)। वास्तविकता मा यो सबै hocus नयाँ गुरु ल्याउँछ भन्दा धेरै कम pocus छ। यसलाई हल्का कार्यकर्ता यो मामला मा एक नयाँ धर्म फेरि काम गर्व हुनेछ छ। एलिस बेली। स्याटर्न सँग जोड्दै क्षेत्र, धोखाधडी? सम्मोहनबाट सावधान रहनुहोस्:
3 मई 2017 मा 10: 30
यो अझै धेरै छ ... धेरै जटिल ... त्यसैले तपाईलाई आफैले सशक्तिकरणमा फर्कन सुनिश्चित गर्न सशक्त पार्नु पर्छ। फेरि एक प्रकारको रूपान्तरित र भक्ति जस्तै हामी यसलाई धर्मबाट थाहा छ। लुइस ट्रस्टको संसारमा स्वागत छ
3 मई 2017 मा 10: 41
मार्सेल खिलवाड, कि "तिनीहरूले" एक निर्देशित ऊर्जा हतियार राख्न हुनेछ म सहमत हुनुहुन्छ मलाई चेतावनी गर्न एम्स्टर्डम अन्तिम फ्रंटियर सम्मेलन समयमा अलग मलाई लाग्यो मानिस। डरलाग्दो प्रेरणा खोज्ने मानिस। यो मान्छे जसले यो रेकर्ड मेटा कटका लागि रेकर्ड गर्यो। किनभने तपाईं "न पुरुष न महिला हो जो शिक्षक" को उज्यालो कामदार छन् भने तपाईं केवल क्लब मा सुन्न (हेर्नुहोस् 12 :. 03 मिनेट) र एलिस बेली को शिक्षा को वाहक हो। हामी सबै जान्दछन् कि hermaphroditic प्राणी प्रतिनिधित्व गर्ने: Baphomet। संसार र शनि संस्कृतको नयाँ धर्ममा स्वागत छ।
3 मई 2017 मा 10: 49
मार्सेल मसीह नम्र कफी prietpraat..Een संग व्याख्यान सर्किट धेरै डरलाग्दो सानो मान्छे मा सुन कमाता, तर त्यसपछि फेरि उहाँले 'झूटा प्रकाश (तपाईं पनि झूट भन्न सक्छ) फैलाउन मिल्ने के क्लब प्रकाश टी एक हो।
र यस समाजमा तपाईं केहि गर्न सक्नुहुन्न, किनभने ग्र्रो लुज नियमहरू:
3 मई 2017 मा 11: 22
मैले पनि ध्यान दिएर उनीहरूले सह-अप्टेशन प्रविधिहरू प्रयोग गर्छन्, जहाँ तिनीहरू झूटसँग सत्य मिश्रण गर्छन्। अर्को शब्दमा उनीहरूले तपाईलाई सत्यको साथ दिन्छन् र तपाईलाई झूट बोक्छन्, ताकि तपाईं रूख मार्फत जंगललाई देख्न सक्नुहुन्न र तपाईं आफ्नो 'नयाँ उमेर' धोकाको लागि गिरिनुहुन्छ।
नयाँ युग विषाणुहरूको अद्भुत संसारमा स्वागत छ। वैसे, नयाँ युग आफ्नो मूल को कबाला / जोहर / ताल्मुड मा पाउँछ।
3 मई 2017 मा 11: 31
बिल्कुल: धेरै परिष्कृत
तर भ्यान स्टेभेन मेरो सम्मोहन भाषणको साथ टोकरी मा र मेरो बारे मा "जो न त पुरुष र न त हो" को बारे मा उनको बारेमा टिप्पणी गर्दछ ...
उनले यो सबै धेरै जटिल र केवल समझ योग्य बनाउछ यदि तपाई यी उच्च सेनाहरु संग बचपन देखि सम्पर्क मा रहनुभएको छ: यसैले उनले आफैलाई एक प्रकार को गुरु मा नियुक्त गर्दछ।
यो सबै त्यो रोमाञ्चक र जटिल छैन किनभने यो यो गर्दछ। अनि निश्चित रूपमा हामी हल्का कर्मचारीहरू हुनुपर्दैन। त्यहाँ कुनै विकल्प छैन जुन "सशक्तिकरण" चाहिन्छ।
3 मई 2017 मा 19: 07
मार्क पासियो मेरो राय मा पनि विश्वसनीय छैन। उहाँले (त्यहाँ पनि एक शैक्षिक सन्देश हो भने) र Aleister क्रोली (आफूलाई भनिन्छ जो जनावर 666) को एक समर्थक मेरो धेरै सकारात्मक मा यहाँ Masonic प्रतीकात्मक रूप बताउँछन्।
यदि उसले क्यान्सर पत्थरलाई बोल्छ जुन सृष्टिकर्ता अनुशासनको माध्यमबाट ज्योतिबाट हटाउन आवश्यक छ, त्यसपछि यो "लुसिफरको प्रकाश" (सृष्टिकर्ता) हो।
यो मानिस मेरो आँखामा खतरनाक सुरक्षा नेट पनि गर्दछ।
4 मई 2017 मा 17: 23
@Martin, एक पल्ट पासियो एक गेटटेपर र धोखाधडी हो, तर उहाँसँग यी समाजहरूको बारेमा धेरै जानकारीहरू छन् जुन सुन्नको लागि योग्य छन्।
यो छवि म इन्टरनेट एभभमा पाइन्छ र युरोपको सबै समाजको उत्पत्तिको राम्रो चित्र दिन्छ:
3 मई 2017 मा 11: 33
शुद्ध न्यू युग कबला
3 मई 2017 मा 13: 02
म कडा नै कस्मोमम ड्राइंग गर्न सक्दिन। म पनि अन्य विद्यार्थीहरूबाट केहि आकर्षित गर्न कोसिस गर्दछु। मलाई लाग्छ कि यो केवल राम्रो रमाइलो हो, र यो व्याख्या मा एक गहिरो तह पनि संकेत गर्दछ।
हन्ना, यो धेरै रोचक कार्यशालाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, सौभाग्य देखि2दिन आउँदैछन्।
जो कोही ज्योतिषमा गहिरो डुब्न चाहन्छन् को लागि उच्च सिफारिश गरिन्छ! "
तपाईले सोच्नु भएको छ कि त्यो रंगीन पेजको साथ मद्दत गरिरहेको थियो।
3 मई 2017 मा 22: 46
तपाईं कसरी पत्ता लगाउनुभयो कि कृतज्ञ सपनाहरुका लागि शुद्ध भूमिका पूरा गर्दछ।
मेरो साथमा, उनको भाषा पर्याप्त, पूर्ण उडा पुरुष, चालाक तर अझै सामाजिक रूपमा बेवकूफको प्रयोग गर्दछ, त्यसैले चालाक छैन तर निको वान डेरि हम, शुद्ध भित्री प्रकारको (ध्रुव सूटमा डरावनी जोडाहरू)
उनको टुक्रामा उद्धरण, तल लिंक हेर्नुहोस्: "मेरो प्रिय आमाले मलाई लाग्छ कि म .... ब्ला ब्ल्ला, हा हा हा तपाईं उनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नुहुन्न भने तपाई सरकार (न्याय) र अधिकको त्रुटिको बारेमा एक धेरै गम्भीर टुक्रामा लेख्नुहुन्छ।
3 मई 2017 मा 13: 15
'दुर्व्यवहार' को कुरा गर्दै, म एक रोचक लेख मा आयो जो कि किनार संग फिट बस्छ: समस्या-प्रतिक्रिया-समाधान।
युरोपको युवाहरूले मतदान गर्न नसक्ने - तर तिनीहरू सामूहिक विद्रोहमा सामेल हुन तयार छन्
युवा यूरोप युरोपमा यो स्थिति बिरामी छन्। हालै सर्वेक्षणको अनुसार, तिनीहरू परिवर्तन गर्न तयार छन्।
580,000 देशहरूमा 35 उत्तरदायीहरू यो प्रश्नलाई सोधिएको थियो: के तपाईं अर्को दिन वा महिनाहरूमा भयो भने पीडितको विरुद्धमा ठूलो-स्तरीय विद्रोहमा भाग लिन चाहानुहुन्छ? 18-वर्षका लागि आधे भन्दा बढी वा 34- हो भन्नुभयो।
केहि हद सम्म सम्बद्ध छ ... नीदरल्याण्ड (नारंगी = 33) 13 स्थानको 33% को साथमा समाप्त हुन्छ। यो VVD चुनाव परिणामहरू जस्तो देखिन्छ ?? , निर्मित डेटा? यसले फेरि यो उपायलाई औचित्य दिनेछ।
28 सेप्टेम्बर 2019 मा 17: 24
इन्टरस्टेलरमा यात्रा गर्ने वर्महोल एक ग्रह शनिको नजिक राखिएको छ। वर्महोलको माध्यमबाट एउटा अर्को ग्यालेक्सीमा जान्छ, जहाँ एक ग्रह भेटियो जहाँ जीवन सम्भव छ।
नायकले भविष्यबाट आफैंमा सन्देश पठाएको जस्तो देखिन्छ, उसलाई नासामा पठाउन, जहाँ तिनीहरू गँड्यौलाको लागि अभियान सुरू गर्न व्यस्त देखिन्छन्। जहाँसम्म, वर्महोल त्यहाँ 48 वर्ष देखि भएको देखिन्छ। वर्महोल नजिकै ब्ल्याक होल पनि छ, गार्गन्टुआ। यस फिल्ममा वर्महोल कस्तो देखिन्छ यो धेरै ब्ल्याक होलको पहिलो फोटो जस्तो देखिन्छ जुन यस वर्षको सुरूमा घोषणा गरिएको थियो। भविष्यवाणी प्रोग्रामिंग को एक प्रकार यति…।
« एडिथ शिपरहरूले अहिले तपाईंको डीएनए प्रोफाईल पनि चाहन्छन्
Elon Musk महान व्यापारी या DARPA साइनबोर्ड transhumane cyborg मान्छे को लागि? »
कुल भ्रमण: 1.408.807
कोरोनाभाइरससँग लड्न सब भन्दा प्रभावकारी तरीका चीनबाट आएको छ (भिडियो)
Riffian op कोरोनाभाइरस कोविड - १ and र विज्ञान: यसले कसरी तपाइँको शरीरमा प्रवेश गर्दछ र तपाइँ यसलाई कसरी स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ?
SalmonInClick op कोरोनाभाइरस कोविड - १ and र विज्ञान: यसले कसरी तपाइँको शरीरमा प्रवेश गर्दछ र तपाइँ यसलाई कसरी स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ?
भविष्यमा op कोरोनाभाइरस कोविड - १ and र विज्ञान: यसले कसरी तपाइँको शरीरमा प्रवेश गर्दछ र तपाइँ यसलाई कसरी स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ?
SandinG op कोरोनाभाइरस कोविड - १ and र विज्ञान: यसले कसरी तपाइँको शरीरमा प्रवेश गर्दछ र तपाइँ यसलाई कसरी स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ?